Ungamphatha kanjani owesifazane ngokusondelana: amathiphu namasu | Amadoda aSitayela
Ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngasese
IsiJalimane Portillo | | Izithandani Nezocansi
Kubo bobabili ubudlelwano nobulili, kufanele wazi ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngasese. Uma sifuna ubudlelwano bukhiqize, bobabili abantu kumele babuthokozele ngokulinganayo. Akuyona yonke injabulo okufanele ithathwe owesilisa noma owesifazane. Siyazi ukuthi kunzima ukujabulisa umuntu wesifazane embhedeni, kepha uma wazi yonke imihlahlandlela, ungahlangabezana nezidingo zocansi.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi ungamphatha kanjani owesifazane ngasese nokuthi yiziphi izinto ezibalulekile.
1 Ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngasese
1.1 Akuyona idoli e-inflatable
1.2 Cha kusho ukuthi cha
1.3 Ungamphatha kanjani owesifazane ngokusondelana: ukuxhumana kanye nama-orgasms
1.4 Imidlalo yokuqala
Kumele sazi ukuthi uma sikanye nomlingani wethu noma senza ucansi nomuntu esimaziyo, kufanele sizibeke endaweni yomunye. Lokho wukuthi, bobabili abantu kumele bajabulele ngokulingana ukuze ucansi lube lusizo. Asikwazi ukuba nobugovu futhi sifune ukwaneliseka kwethu. Ukufunda ukuthi ungaphatha kanjani umuntu wesifazane ngokusondelana lokhu kuyisisekelo. Abesifazane bavame ukuba nesikhathi esilula kakhulu sokwenza amadoda afinyelele ku-orgasm. Amadoda ahlelelwe ukukhishwa kwe-ejaculation ngaphambili ngezizathu zokusinda. Kodwa-ke, owesifazane unesitho esinikezelwe ngokukhethekile enjabulweni nokuthi kufanele wazi ukuthi ungashukumisa kanjani kahle.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngasese, kufanele ulandele lezi zincomo:
Akuyona idoli e-inflatable
Hlala wazi ukuthi amadoda amaningi enza iphutha lokuya ocansini nentombazane ngaphandle kokubonisa noma yiluphi uhlobo lwentshisekelo. Kwenza abesifazane abaningi bazizwe sengathi bayimbobo nje njengethoyizi locansi. Yize kungebona bonke abanjalo, kulula ukuba nentshisekelo yangaphakathi. Akufanele futhi uyiphoqe. Iqiniso lokuthi le ndoda ibhulasha okuthile elinde ukufika kuvuthondaba kunganciphisa kakhulu.
Ubulili akufanele buphele kuphela nge-orgasm yesilisa. Uma engenayo eyodwa qiniseka ukuthi ufika lapho bese uqeda. Kokubili owesilisa nowesifazane kumele benze umlingani wabo azizwe ukuthi bazizwa yena ngaso sonke isikhathi. Ucansi akumele lube yisenzo sobugovu ngoba kuyindaba yezimbili.
Cha kusho ukuthi cha
Kokubili endabeni yamakhondomu nobulili bendunu, akuyena cha. Uma owesifazane engafuni ucansi lwendunu, kufanele uluthathe ungaphikeleli. Kungokufanayo nangekhondomu. Kufanele ushiye zombili ufake ikhondomu ukugwema izifo ezithathelwana ngocansi. Uma ekutshela ukuthi akafuni ukulala nawe, ungaphoqeleli. Hhayi kukhamera kuphela, kepha akasona isigqila socansi futhi akudingeki ukuthi enze konke okushoyo uma engazizwa ethanda. Nanamuhla abesifazane abaningi bacwile ezingxoxweni ngezimo lapho indoda iphoqa khona owesifazane ukuthi aye ocansini.
Ubulili buyindaba emibili. Uma umbono wakho ungahambisani nowomlingani wakho, kufanele ulinde bobabili bavumelane. Kungaba futhi yindoda engazizwa ithanda ukuya ocansini kanti nowesifazane kumele ayihloniphe ngendlela efanayo.
Ungamphatha kanjani owesifazane ngokusondelana: ukuxhumana kanye nama-orgasms
Kunconywa ukuthi ucansi alupheli kuphela nge-orgasm yesilisa. Uma owesifazane engenawo, futhi uzokhathala kakhulu ngemuva kokufika, qiniseka ukuthi ufika ngaphambi kwesikhathi. Isithandwa esihle sihlala simlinda ukuba afike kuvuthondaba noma azame ukufanisa ngesikhathi. Zikhona ebudlelwaneni obuningi lapho indoda ifinyelela i-orgasm ngaphandle kokulinda umlingani wayo noma ingakhathazeki ngaye. Uma lokhu kwenzeka, kungcono ukuqhubeka nokuhlola ngesandla sakho ukuze uthuthukise isikhathi esikwaziyo ukuya ngaso ocansini.
Ukuxhumana kubalulekile ukwenza ucansi olumnandi. Kukhona abanye abantu abangafuni ukukhuluma embhedeni, yize kungewona umthetho wawo wonke umuntu. Akukaze kube buhlungu ukwazisa omunye umuntu ukuthi uhamba kanjani. Ake sicabange ukuthi owesifazane wenza i-fallatio endodeni. Kuyabonga kakhulu ukukhombisa ukuthi iyayithanda yini, uma uyifuna ngokushesha noma kancane, ingcindezi enkulu, ukuhambisana nezandla, njll. Kwenzeka okufanayo uma ufuna ukwenza isikhundla esithile, kungcono ukusho njalo futhi ube nokuxhumana ngaso sonke isikhathi.
Ukuze ufunde kahle ukuthi ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngokusondelana, kufanele ucabange nge-foreplay. Abesifazane banezindawo eziningi ezine-erogenous kunamadoda. Lapho uvuselela kakhulu owesifazane ngaphambi kokungena, ngcono ucansi luzophuma. Ukude noma ukuvuselela ngaphambi kokuya ocansini, ngcono i-orgasm neyakho. Noma kubonakala kungahlobene, yenza isivivinyo. Thinta izingono, intamo, ukhalo nesitho sangasese sowesifazane. Ukwazi ukuthi ungaphatha kanjani i-clitoris kubalulekile ukukhuthaza owesifazane kakhulu. Uma usuvuselele owesifazane ngangokunokwenzeka, qala ukusebenzisa ipipi bese uqala ukungena.
Isincomo esijwayelekile akufanele siqale phansi. Akufanele uthinte umunwe noma uthinte isitho sangasese esingagcotshisiwe. Thola umphumela ohlukile. Indlela ephumelela kunazo zonke yokukhuthaza umlingani wakho ukuthinta zonke izingxenye ngaphandle kwesitho sakhe sangasese. Uma wazi ukuthi ungathinta kanjani ezinye izindawo zakhe ezinobungozi, ukuze izifiso zakhe zikhule futhi ngikuthokozele lokho kukhuthazeka kakhulu.
Elinye icebo elinikezwa ukufunda ukuthi ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngokusondelana khumula amasokisi. Yize lokhu kuyimpikiswano ngandlela thile, kukhona abesifazane abangawafuni amasokisi ngesikhathi socansi njengoba nje abanye bengenandaba. Kwezinye izikhathi zasebusika zinganconywa, yize into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi kufanele ukhumule amasokisi akho.
Iseluleko esihle kakhulu ongasinikeza sokufunda ukuthi ungamphatha kanjani umuntu wesifazane osondelene nawe ukusungula. Akudingeki ukuthi ngaso sonke isikhathi wenze okufanayo. Ubulili akufanele bube yisicefe noma inqubo ejwayelekile. Noma uthola isikhundla lapho angafinyelela khona i-orgasm, ungasisebenzisi kabi leso sikhundla. Akudingeki ukuthi ikujabulise ngaso sonke isikhathi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngasese.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Ungamphatha kanjani umuntu wesifazane ngasese
UMartin Lamb kusho
Nginentshisekelo kulwazi ongangithumelela lona ukungisiza, kubonakala kimi ukuthi unemibhalo engiyidingayo.
Phendula uMartin Cordero
Imikhiqizo yokubumba yabesilisa
Izinhlelo zokusebenza zokuthenga izingubo